DFS oo War cusub kasoo saartay walaaca laga muujiyay Tallaalka COVID-19 | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta DFS oo War cusub kasoo saartay walaaca laga muujiyay Tallaalka COVID-19
DFS oo War cusub kasoo saartay walaaca laga muujiyay Tallaalka COVID-19
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ee xil-gaarsiinta ayaa War kasoo saartay tallaalka OXFORD/ASTRAZENECA ee looga hortego Cudurka halista ah ee COVID-19 ee dhawaan la keenay Magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay in Wasaaradda muddo Isbuuc ay dabagal iyo xaqiijin ku waday tallaalka, kadib markii halis lagu sheegay, ayna hakiyeen qaadashadiisa qaar kamid ah dalalka Caalamka.
Wasaaradda ayaa sheegtay in tallaalka OXFORD/ASTRAZENECA ay baaritaano kala duwan ku sameeyeen Hay’addo kala duwan oo Caafimaad oo ay qeyb ka tahay Hay’adda Caafimaadka Aduunka WHO, isla markaana la xaqiijiyay inuu waxtar leeyahay, ayna dib u fasaxeen Isticmaalkiisa dalalkii horey u hakiyay ee shakiga geliyay.
Sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamtay in wararka iyo tallooyinka Caafimaad ay ka qaatan, Hay’adda Caafimaadka iyo khubaro Arrimaha Caafimaadka ku xeel-dheer.
Si kastaba Warka kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa waxaa uu kusoo aadaya, iyada oo walaac farabadan laga muujiyay qaadasha tallaalka OXFORD/ASTRAZENECA ee dalka la keenay, isla markaana ay hakiyeen qaar kamid dalalka Caalamka, wallow ay dib u fasaxeen qaadashadiisa.
Maqaal horeDowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay weerar ka dhacay Sacuudiga
Maqaal XigaMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo soo gaaray Magaalada Muqdisho